Budata EaseUS Data Recovery Wizard for Mac maka Mac
Budata EaseUS Data Recovery Wizard for Mac
Free Budata maka Mac (10.20 MB)
Budata EaseUS Data Recovery Wizard for Mac,
Ọkachamara Iweghachite Data EaseUS maka Mac bụ faịlụ na mgbake data emebere maka Mac. Dị ka a mma na adaba omume, ọ na-enye gị ohere naghachi furu efu, ehichapụ na-apụghị ịnweta data na faịlụ na gị Mac niile wuru draịva na nchekwa ngwaọrụ. Data a nwere ike ịbụ foto, egwu, akwụkwọ, vidiyo, ozi-e, ebe nchekwa na faịlụ ọ bụla ọzọ.
Usoro ihe omume, nke ị nwere ike naghachi niile furu efu ma ọ bụ ehichapụ faịlụ gị Mac kọmputa, mpụga disk, USB disk, SD kaadị, ebe nchekwa kaadị, dijitalụ igwefoto na ngwaọrụ ndị ọzọ, na-arụ ọrụ nnọọ mfe na ngwa ngwa na 3 nzọụkwụ. Nke mbụ nime usoro ndị a bụ ịhọrọ ụdị faịlụ furu efu nke ịchọrọ iweghachi. Mgbe ahọpụta faịlụ ụdị, usoro ihe omume amalite ịgụ isiokwu. Mgbe usoro nyocha ahụ mechara, ị nwere ike ịhụchalụ faịlụ achọrọ netiti nsonaazụ enwetara, na mgbe ijide naka, ị nwere ike iweghachi faịlụ ahụ. Ana m akwado ka ndị nwe Mac niile jiri mmemme ahụ, nke bara uru ma dị mfe iji.
Naghachi kpamkpam ehichapụ, ahazi ma ọ bụ data enweghị ike ịnweta
Ọ nwere ike naghachi ọtụtụ akwụkwọ, foto, vidiyo, music na email data si Mac gị na kọmputa ma ọ bụ nchekwa ngwaọrụ.
Na-echekwa oge site na nlele tupu mgbake
Nchekwa, dị irè ma dị mfe iji
EaseUS Data Recovery Wizard for Mac Ụdịdị
Nha faịlụ: 10.20 MB